सूचना र प्रविधिको उत्सव, क्यान महोत्सव : पाण्डे | NepalDut
क्यान महासंघ कास्कीले १० औं मेला गरिसकेको छ । ११ औं महोत्सवको तयारी हुँदै गर्दा यो बीचमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
क्यान महासंघ कास्कीमा अहिलेसम्म संस्थापकहरुले नै अहिलेसम्म नेतृत्व गरिरहेका छौं । पहिलो महोत्सव गर्दा घाटामा गयो भने पनि पैसा उठाएर खर्च धानौंला भनी गरेका थियौं । अहिलेजस्तो धेरैलाई जानकारी हुने कुरै भएन ।
११ औं महोत्सवमा आइपुग्दा यो बीचमा धेरै परिवर्तन भए । सबैले बुझिसके । सबैलाई यसबारे जानकारी भयो । अब मेला गर्न सजिलो छ । अर्को तरिकाले भन्दा, यो महोत्सव एक तवर स्थापित भयो, कास्कीका मानिसका लागि नियमित आकर्षणको कुरा बन्यो ।
अहिले सूचना, प्रविधिबिना त मानिसको एक पाइलो पनि नचल्ने भो । त्यो बेला यो सर्वसाधारणको पहुँचमा पनि थिएन । निकै महंगो थियो । सजिलै ल्याउन सकिँदैनथ्यो । अब सबै क्षेत्रमा यसको अपरिहार्यता पुष्टि भएको छ ।
अनगिन्ति महोत्सव भइरहने ठाउँ हो पोखरा । अरुभन्दा क्यानको महोत्सव के कुरामा फरक छ त ?
धेरै फरक छ । यो ज्ञानवद्र्धक छ । सबै नयाँ प्रविधिबारे जानकारी दिइन्छ । नितान्त नयाँ प्रविधि र उपकरणबारे जानकारी दिनमा जोड दिइन्छ । यसबारेमा अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, कार्यपत्र, सेमिनार प्रस्तुत पनि हुन्छ ।
पुरानादेखि लिएर विश्वमै आएका नयाँ प्रविधि र उपकरण यहाँ पाइन्छन् । इन्फोटेक सस्तोमा सामान र सित्तैमा ज्ञान दिइने अपूर्व अवसर हो । केन्द्रपछि क्यान कास्की नै अग्रणी मानिन्छ ।
तपाईको आइटी क्षेत्रमा संलग्नता र भागेका चुनौतीबारे बताइदिनुस् न ।
म २३ वर्षबाट यो क्षेत्रमा संलग्न छु । यो बीचमा धेरै ठूलो परिवर्तन भयो । चुनौती सबै क्षेत्रमा हुन्छन् । स्वभाविक रुमपा हाम्रो क्षेत्रमा पनि धेरै चुनौती छन् । आनन्द पनि छ । व्यवसायमा रमाएरै यति लामो समय गयो । यो अरु पेशा जस्तो होइन । नयाँ कुरा सिक्नु पर्छ । सधै विद्यार्थी भइन्छ । जहिल्यै पनि नयाँ कुरा, मेसिनसँग अपडेट हुन पाइन्छ ।
पाण्डे कम्प्युटरले टाइटल स्पोन्सर गरेको खुला टाइपिङ प्रतियोगिताबारे प्रकाश पारिदिनोस् न ।
यसपालिको खुला टाइपिङ प्रतियोगितालाई हामीले सघाएका छौं । प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार २४ इन्चको कलर टिभी, दोस्रो पुरस्कार ३ इन १ प्रिन्टर र तृतीय पुरस्कार उफर दिइनेछ । यो प्रतियोगिताले टाइपिङ कम्प्युटर चलाउने बेसिक कुरा भएकाले कम्प्युटरको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतियोगिताले सघाउने हाम्रो अपेक्षा छ ।